やさしさと現実と闇: Chy's Nepalese Life.
« 2日間の爆音の正体 | トップページ | ＊お願い＊ »
2013年9月21日 (土) 18時53分 | 固定リンク
अहिले मलाई एकदम एकदम दु:ख लाग्यो । किनभने, मैले अग्रजाको ब्लगको कमेण्ट लेखेको थिएँ । झण्डै, ५० वाक्यहरू तर, उडेर गयो । कहाँ उडेर गयो ?????? मलाई थाहा छैन । मैले, सिफ्ट थिचेको बेला, अचानक उडेर कहीँ गइहाल्यो । त्यसैले, मलाई ठूलो स्यक लाग्यो । त्यसैले, यो ब्लगमा सोझो कमेण्ट नलेखीकन, फरक पेजमा लेखेर, अग्रजाको ब्लगमा टाँस्नु पर्छ होला । जे होस् मलाई ठूलो स्यक लाग्यो ।
फेरि एकै वाक्य लेख्न, म सक्दिनँ होला । मैले अग्रजाले म:म:( मोमो) खाएको ठाउँमा माग्ने केटाकेटीहरूलाई म:म: नदिएको कुरा राम्रो कुरा हो । वरिपरिको नेपाली मान्छेहरूले म:म: दिएको कुरा, आफ्नो अर्कोजन्ममा राम्रो जीवन बिताउनको लागि होला । तर, नेपाली मान्छेहरूले अझ गहिरो बिचार नगरीकन नहुने कुरा हो । नभएको मान्छेलाई, केही दिने कुरा राम्रो कुरा हुन त हो तर, केही दिनाले ( दियो भने,) त्यसमान्छेको काम गर्ने जाँगर=やる気（駒ヶ根弁で言うと”ズク”）, काम गर्ने मनलाई मारिदिन सक्छ । त्यसैले म:म: खान चाहेको मान्छेलाई खुवाइदिने कुरा, काम गर्ने जाँगर, आफ्नो जीवनको बारेमा बिचार गर्ने कुरा, मन आदि सबैलाई मारिदिन्छ । त्यसैले अग्रजाले नदिएको कुरा एकदम राम्रो भयो ।
म नेपालमा बसेको बेला, मेरो आफ्नो पसल पनि थियो । त्यसबाहेको म टुरिष्ट( पर्यटक ) गाइड गर्थें । गाइड गर्ने बेला, मैले लिएर जाने मेरो गेष्टहरूलाई, जानु अगि, कृपया, केटाकेटीहरू र माग्ने मान्छेहरूलाई केही पनि नदिनुस् । तपाईंले दिनुभएको पैसाले माग्ने केटाकेटीहरूको बाबुआमा रक्सी पिएर, काम नगर्ने मान्छे हुन्छन् । त्यसैले नदिनुस् भनेर भन्थें । तर, म काममा जाने बेला, माग्ने केटाकेटीहरूले मलाई नराम्रो कुराहरू भन्थे । मेरो बिचारमा, काम गर्न नसक्ने, बूढाबूढी र अपाङ्गता भएका मान्छेहरूको लागि, नेपालको सरकारले केही पनि व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले उपाय छैन होला । तर, केटाकेटीहरूले काम गर्ने कोशिस गरे भने, गर्न सक्छन् । तर, काम गर्नुभन्दा सजिलोसँग पैसा कमाउन सक्ने बाटो रोजेको ( छानेको) मान्छेहरूलाई माया गरिदिने कुरा, राम्रो मान्छेलाई चोर बनाउने कुरा जस्तो कुरा हो । यदि यस्तो ग-यो भने( माग्ने केटाकेटीहरूलाई केही दियो भने), अर्कोजन्ममा दु:ख हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली दयालु भनाउँदाहरूले बिचार गर्ने समय आइसकेको कुरा बुझ्नु पर्छ । （दयालु भनाउँदाहरू ＝親切と言われている）नत्र, माग्ने केटाकेटीहरूलाई काम गर्ने जाँगर मारिदिएको पाप, अर्को जन्ममा भोग्नु पर्छ । पाप＝罪 भोग्नु ＝償う यस्तो कुरा बुझ्न जरूरी छ होला ।
जानकारीको लागि नेपाली मान्छेहरूलाइ विदेशी सहयोग आउँछ । विदेशीले नेपाली मान्छेहरूलाई विभिन्न कुराहरू सहयोग गरेको कारणले, अहिले अग्रजाहरूलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । "तपाईंले हामीहरूलाई के दिन आउनुभयो ? " " यो बनाइदिनुस् । " त्यो बनाइदिनुस् । " भनेर स्पष्टसँग भन्ने मान्छेहरू नेपालमा धेरै छन् । :" खै, तपाईं त नेपालमा बसेर केही पनि बनाइदिनुभएन । " तपाईंले त नेपाललाई माया गर्नुभएन।" भनेर पनि भन्छन् । यो सबै, नेपाली मान्छेहरूलाई मद्दत(सहयोग) गरिदिएको पाप, अहिले अग्रजाहरूले भोगिरहेका छन् । नेपालीलाई माग्ने कुरा उहिले लाज लाग्थ्यो । तर, अहिले, सामान्य कुरा भइसकेको छ । उल्टो, दिएन भने, गाली पनि गर्ने भइसकेका छन् । गाली खानुभन्दा दिनु बेस् जस्तो पनि लाग्छ । अग्रजा, अहिले गाली खाए पनि, पछि गाली होइन, राम्रो कुरा सुन्न सक्छौ । त्यसैले अबदेखि पनि केही पनि नदिनु बेस् ।
नेपालको अँध्यारो भाग, " आङ्पाङ खाएको कुरा ।" यस्को बारेमा पनि मैले अग्रजालाई भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ । जानकारीको लागि नेपालमा साना साना केटाकेटीहरूले पनि ( स्ट्रीट चिल्ड्रेन) गर्छन् । यी कुराहरू पनि बाहिरबाट आएका कुराहरु हुन् । रक्सी, औषधि, गाँजा, आदि कुराहरूले नेपाली मान्छेहरूलाई जिउँदै मारिरहेका छन् । तर, जापानमा पनि यस्तो कुराहरू धेरै छन् । जापानमा पनि, धनी मान्छेहरू मात्र होइनन्, सामान्य मान्छेहरू पनि काकुसेइजाइ प्रयोग गर्ने मान्छेहरू छन् । नेपालको विद्यालयमा विशेष गरी काठमाण्डौं, पोखरा जस्तो ठूला शहरको विद्यालयमा औषधि प्रयोग गर्ने केटाहरू पनि, केटीहरू पनि धेरै छन् । यस्ता कुराहरू पनि, विद्यालयबाट ज्ञान दिएर कम गर्दै जानु पर्छ होला । ठमेलमा माग्ने केटाकेटीहरू मात्र होइनन् , सामान्य घरका सामान्य मान्छेहरू पनि औषधिका कारण, विभिन्न समस्याहरू उठिरहेको छन् । त्यसैले विकास, उच्च जीवनस्तर＝高生活水準, विभिन्न ज्ञान, जानकारीलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेन भने, नराम्रो बाटोमा जाने सम्भावना धेरै धेरै छ । होस् गरौं । जानकारीको लागि जापानी स्वयंसेवकहरूले पनि होस् गर्नु पर्ने कुरा हो । लागू औषधि प्रयोग गर्ने कुरा, एड्स आदि कुराहरूको बारेमा ।
लामो कुरा लेखेर अग्रजाको कपाल नदुखाऊँ । ल त, फेरि स्काइपमा भए पनि कुरा गरौं । समय मिल्यो भने । ल त, आजको लागि यति मात्र अरु पछि । राम्रोसँग बस है ।
投稿： म | 2013年9月24日 (火) 06時30分